Dankook University - Higher Education an-tany hafa any Korea Atsimo
fanafohezan-teny : DKU
Créé : 1947
Aza adino ny discuss Dankook University
Eo ambany ny mpanorina mottos ny “National Famonjena, Independence sy ny Self Niantehitra,” ary koa ny mitarika ireo fitsipiky ny “Ny fahamarinana sy ny Service,” Dankook University dia nanatontosa tamim-pahatokiana ny asa fitoriana ny bika aman'endrika sy ny fanamoràna ny talenta tanora akademika fandrosoana.
In 1967, Dankook University dia ambony ny oniversite toeran'ny. Noho ny fampidirana ny toeram-pianarana faharoa in Cheonan, DKU tonga ny voalohany Korea teo ny oniversite mba hanana sampana fonenan'ny mpianatra. DKU nanohy ny fitomboana mahatalanjona amin'ny varavaran'ny ny nify amin'ny hopitaly 1984 ary ny ankapobeny hopitaly ao 1994.
taorian'ny 60 taona ny miavonavona tantara ao Seoul, DKU nifindra ny toeram-pianarana fototra ho Jukjeon in 2007, amin'ny ezaka mba hanomana ny tenany ho dingana lehibe amin'ny maneran-mandroso taona. taorian'ny 30 nandritra ny taona maro feno fanoloran-tena panangonana, efa vita “An Unabridged Dictionary ny Shinoa Characters nampiasaina tamin'ny Koreana” – ny lava indrindra sy ny antsipirihany indrindra amin'ny karazany. Ankoatry ny, rehefa mahomby 2010 asaovy ho fanafody College ao amin'ny tobim-pianarana Cheonan, efa nametraka ny fototra mafy ho amin'ny fiainana manokana siansa. Ny Cheonan fonenan'ny mpianatra LINC Group Project no voafidy ho ny firenena niavaka indrindra, ary izany dia efa manome tetikasa isan-karazany eo ambany ny tanjona amin'ny fametrahana ny fitsipika ho an'ny orinasa-oniversite ny fiaraha-miasa. Mandritra izany fotoana izany, the Jukjeon campus has focused its research and investment on Information Technology (IT) ary Kolontsaina Teknolojia (CT). Miaraka amin'ny fahombiazana vao haingana ao amin'ny governemanta tetikasa, 'Intellectual Property Education Project’ ary 'Fambolena Project ho Startup-Mitarika ny Anjerimanontolo,’ ny Jukjeon toeram-pianarana dia naka ny dingana vaovao rahateo ny ho tonga ny foibe ho an'ny orinasa sy ny fiaraha-miasa amin'ny oniversite-raharaham-barotra startup fandaharana.
Efa ela akory izay namarana goavana fanavaozan-drafitra ny oniversite sy ny rafitra ara-panjakana ho toy ny ampahany amin'ny ezaka mba hahazoana ny hoavin'ny Dankook University ho iray 'izao tontolo izao-kilasy anjerimanontolo. koa, dia nanorina ny ambony-ny-ny-tsipika rafitra fanompoana izay manefa mpanjifa filàna, hararaotina haino aman-jery vaovao sy ny fanabeazana anatiny, ary miantoka mahomby kokoa ny fikarohana sy ny fitantanana. Nalaina avy ireo hitany, DKU no fampidirana ny campus, ary nandefa 'Campus Dual System’ nanomboka tamin'ny 2014, izay mifantoka amin'ny specialization.
Eo ambany ny fanevan'ny “Fanamby sy ny Famoronana,” amin'ny sampam-pianarana sy ny mpiasa ny Dankook University dia hanao ny tsara indrindra mba hampitombo ny fifaninanana ny DKU sy hanatsara ny toerana misy ny Dankook marika. Mba hampifaly for Dankook ny “Fanamby sy ny Famoronana” rehefa manao ny dingana mba ho mpitarika ny vanim-potoana vaovao.
Nanorenana filozofia ny Dankook University - National Famonjena, Independence sy ny fizakan-tena - Avy amin'ny idealy izay manokana ny mpanorina Mr. Beomjeong, Chang Hyong sy Mrs. Hyedang, for Huijae efa namboly tao amin'ny tenany amin'ny alalan'ny fotoana korontana ao Korea tantara. Izy ireo mihitsy niaina ny alahelo ho very ny firenena eo ambany fitondran'i Japoney ary farany dia resy lahatra fa afaka fahaleovantena ihany no ho tratra amin'ny alalan'ny fanabeazana ny olona manan-talenta sy tia tanindrazana. Ny mpanorina roa nahatsapa fa ny fianarana tsy maintsy mampiasa ny fahaizany tsy ho an'ny tena manokana harena fa ny firenena iray manontolo, entin'ny ny fahatsapana ny maha-pirenena sy ny tantara / ny fahamarinana ara-tsosialy. Tokoa, dia nino fa ny adidy Dankook University mba hampiofanana nohazavaina toy izany ny olona.
Ankoatra ny toy izany idealy, Dankook University maneho fitiavana ny fahamarinana sy ny asa fanompoana ho toy ny fitsipika mitarika. Izany dia ny finoana fa ny tanjona ny fikarohana sy ny fianarana any an-dafin'i lainga mahazo fitaovana fotsiny ho an'ny sakafo - ny tena tanjona ambony fianarana dia ny karena ny fahalalana maha-olombelona sy ny kolontsaina. indrindra, manam-pahaizana dia tsy maintsy hiverina fahalalana toy izany ny fiaraha-monina sy mandray anjara amin'ny fandrosoana ara-tantara. Tsy maintsy mikatsaka ny hampivelatra maranitra, manakiana sainy sy ny fitondran-tena marina toetra; rehefa manao izany, ary an-tsitrapo mandray anjara amin'ny fanatsarana ny fiaraha-monina iray manontolo, ny iray maneho ny lalana Dankook maniry mba hanangona. Efa ny azo hozongozonina tonga saina toy izany fanoloran-tena mankany amin'ny andraikitry ny fianarana ambony sy ny fitiavan-tanindrazana izay nitondra nankany amin'ny Oniversiten'i Dankook ny fisiany amin'ny endrika ankehitriny.
College ny Engineering, the College of Architecture
The university was launched based on the financial donations of the late Hyedang, Cho Huijae and the former chairperson Park Jeongsook, as well as the education philosophy of Beomjeong, Chang Hyong. At its foundation, ny oniversite nanana 960 mpianatra, with two departments in the Faculty of Law and three departments in the Faculty of Liberal Arts. Professor Chang Dobin was inaugurated as the first dean.
Ianao ve mila discuss Dankook University ? Any fanontaniana, fanehoan-kevitra na hevitra
Photos: Dankook University ofisialy Facebook